Posted by pandora at 2:48 PM
Literary Blog လို့ကိုယ့်ဘာသာ သတ်မှတ်ထားပြီး စိတ်မကောင်းစရာဘာများရှိပါလိမ့်..
ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် ..နောက်ဆုံးမှာ စဉ်းစားစရာ…Literary ကလေးနဲ့ အဆုံးသတ်ထားလိုက် ပြန်ပါပကောလား…
နိဂုံးချုပ်ထားတာ လေး အရမ်းကောင်းတယ် :)
မပန်ရေ.. ဗဟုသုတရသလို ရှုထောင့်မျိုးစုံကနေ ရေးပြသွားတဲ့အတွက် တကယ်ကို လေးစားတယ်... အကြိုက်ဆုံးက နိဂုံးပဲ... အိပ်မက်တွေ တကယ်ဖြစ်လာပါစေ...
အမရေ.. ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းစရာပဲ။
မုန်တိုင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲမှာ မြန်မာပြည်ကို ဘယ်လို ကူညီ ပံ့ပိုးရမလဲဆိုတာပဲ .. အဖြေရှာကြရအောင်ပါ။
ဖြစ်ပီးမှ တော့ အကောင်းဆုံးကိုပဲ လုပ်ဆောင်ရမှာပေါ့။
ဗဟုသုတ တော်တော်ရသွားပါတယ်။ ကျေးဇူးပါပဲ
For those in SG,
You all can help the victims through these channels if you wish.
"Due to Cyclone Nargis disaster , nearly 100,000 of burmese are homeless now.We are now raising fund urgently.For donation, pls contact to
Ko Aye Ko Ko 96352064
Ko Win Kyaw 81898420
Ko Soe Tun 94874413
Ko Min Thein 81860042
Ko Nyi Nyi Aung 97420905
Ko Thu Yein Win 81868156
Ma Lei Lei 92726744 "
1. Lin Let @2Flr , pennisula plaza
2. Sin Myanmar @3Flr, Pennisula Plaza
3. Lan Pya Kyal @5Flr, Pennisula Plaza
4. Daw Than Than Nu ( Tha Byae Nu ) at Pennisula Plaza